Fika 4 hampiasana Spotify tsara kokoa amin'ny telefaona Android | Androidsis
Fika tsotra 4 hampiasa Spotify kokoa
Eder Ferreno | | Fampiharana Android, Mozika maimaim-poana
Spotify dia iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra amin'ny Android. Ny sehatry ny streaming Suède dia mamela antsika hanana fidirana amin'ny hira maro be amin'ny fomba tena tsotra, noho izany dia safidy tsara tokony hotadidina ao an-tsaina foana. Ho fanampin'izany, mazàna dia mamela antsika hanana asa vaovao izy io, toy ny mety manakana mpanakanto. Fampiasana sasantsasany izay azonao andramana alohan'ny olon-kafa misaotra ny beta.
Fa miaraka amina endri-javatra maro be ao amin'ny fampiharana, misy foana ny andian-tetika hampiasana azy amin'ny fomba tsara kokoa. Izany no toe-javatra misy an'i Spotify, izay azontsika ampiasaina amin'ny fomba tsara miaraka amina tetika tsotra maromaro. Ireto misy tetika efatra izay hanampy anao tokoa.
1 Mihaino hira indray amin'ny alàlan'ny tantara
2 Raiso lisitra
3 Mampiasà fomba manokana
4 Hamafa ny cache
Mihaino hira indray amin'ny alàlan'ny tantara
Mety efa nandre hira tao amin'ny Spotify ianao tamin'ny fotoana iray. Rehefa afaka kelikely dia te hihaino azy indray ianao, saingy tsy azonao antoka tsara ny anaran'ny hira. Amin'ity tranga ity dia tena tsotra ny vahaolana, satria afaka mampiasa ny tantara amin'ny fampiharana ihany isika. Noho ity tantara ity dia ho hitantsika ireo hira rehetra efa henontsika. Mba hahafahantsika mahazo miditra amin'ilay hira tadiavintsika hohenoina amin'ity tranga ity.
Amin'ity tranga ity, ao anatin'ny app Spotify amin'ny Android dia mila tsindrio ilay bara mihaino anao izao. Mipoitra eo ambonin'ny latabatra menio ao anaty ilay app ihany izy io. Avy eo tsindrio ny bokotra filaharana filalaovana. Avy amin'izany no ahafahanao miditra amin'ny tantaran'ny hira rehetra efa nohenoinao tao amin'ny app. Ho hitanao amin'izay ny hira tadiavinao tamin'io fotoana io ary amin'izany no ahafahanao miditra aminy indray.
Raha misy hira tianao tsy ho very amin'ny fotoana iray, azonao atao ny manampy azy ireo hatrany amin'ny playlists amin'ny app. Tena hanampy tokoa ny fananana azy ireo ao amin'ny kaontinao foana, na inona na inona fitaovana ampidirinao. Na dia natokana ho an'ireo mpampiasa manana kaonty premium aza io asa io.
Matetika ny mpampiasa dia mamorona ny lisitra filalaovany manokana ao amin'ny Spotify. Ka tsy mila mitady hira isaky ny mampiasa ilay app amin'ny findainao ianao. Amin'io lafiny io dia tsy misy olana. Na dia azo atao aza amin'ny fotoana iray, tsy nahy, hamafa ny iray amin'ireny playlist. Zavatra mety hitranga izany, fa tsy mila mikoropaka ianao, satria azonay atao ny mamerina azy.
Mila miditra amin'ny mombamomba ny kaonty izahay. Ao anatin'ny fampiharana Android amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra kodiarana. Rehefa manao izany, ao amin'ny faritra fampahalalana, tsy maintsy manao izany isika mitadiava safidy izay hamerenana amin'ny laoniny ny lisitra. Ireto ny playlists izay nofafanao tao Spotify. Afaka misafidy ireo izay tianao hamerina amin'ny kaontinao amin'ny fomba tsotra ianao. Afaka mihaino ireo hira rehetra ireo amin'ny telefaona indray ianao, araka izany. Io safidy io dia mivoaka rehefa mamafa ny lisitra iray ao anaty app izahay, koa raha tsy nitranga taminao izany dia mety tsy ho hitanao eo amin'ny sehatra izany.
Mampiasà fomba manokana
Indraindray isika rehetra dia mihaino hira iray izay fahafinaretana meloka. Tianao izany, na dia somary menatra aza ianao amin'izany. Ka tsy tianao ho hitan'ny namanao fa mihaino an'io hira io ianao amin'ny Spotify amin'ny fotoana rehetra. Tsy olana io, satria ao amin'ny rindrambaiko ihany azontsika atao ny mampiasa fomba manokana. Ka manana ny fahaizana mihaino mozika isika, saingy tsy misy mahita izany.
Ity dia zavatra iray tsy maintsy ampifanarahintsika amin'ny fikirana Spotify, fipihana eo amin'ny kisary cogwheel. Ao anatiny no ahitantsika manokana an'io fizarana io. Noho izany, tsy misy ny namantsika no afaka mahita izay henontsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny fampiharana. Isaky ny tianao dia azonao atao ny miverina amin'ny maody mahazatra amin'ny fampiharana, manaraka ireo dingana mitovy.
Hamafa ny cache
Spotify dia fampiharana ampiasain'ny mpampiasa matetika tsy tapaka, angamba isan'andro. Noho izany, toy ny amin'ny rindranasa hafa izay ampiasainay matetika amin'ny Android, cache be dia be azo foronina. Ka tokony hofafanao tsy tapaka izy io mba tsy hitrandraka toerana be loatra amin'ny telefaoninao.
Ao amin'ny Android dia efa fantatsika ny fomba ahafahana manadio ny cache. Na dia amin'ny tranga Spotify aza dia zavatra azontsika atao amin'ny fampiharana tsotra sy haingana be izany. Noho izany, dia mety hahaliana ny maro izany. Mila miditra fotsiny ianao amin'ny fametrahana azy. Ao amin'izy ireo, misy fizarana mampiseho ny habaka nozahana ary eo, eo ambany fotsiny, dia avela hamafana ny cache. Segondra vitsy monja vao vita.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fika tsotra 4 hampiasa Spotify kokoa
Facebook dia hanavao ny famolavolana ny fampiharana Android
Mandresy ny planeta iray manontolo miaraka amin'ny tafiky ny saka ao amin'ny The Battle Cats